नेपाली जनताले रेल आएको खुसि साट्न नपाउदै नेपालमा आएको रेल पुनः भारततर्फ नै फिर्ता लगियो – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपाली जनताले रेल आएको खुसि साट्न नपाउदै नेपालमा आएको रेल पुनः भारततर्फ नै फिर्ता लगियो
काठमाडौं, असोज ४ । सरकारले डेढ वर्षदेखि निर्माणाधीन जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक पूर्वतयारीमा चुक्दा नेपालमा आएको रेल पुनः भारततर्फ नै फिर्ता लगिएको छ । नियमित रूपमा रेल सञ्चालन गर्न डेढ महीनाजति लाग्ने नेपाल रेलवे कम्पनीले बताएको छ ।
श्रीमती बेचेको झुटो मुद्दामा बमबहादुर सार्की यसरी जेल परेका थिए ….
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा रेणु दाहालको उम्मेदवारी दर्ता
लो’ग्ने भनेको स्वा’स्नीको शरीर ब’लियो हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ !
यसरी गर्नुहोस् आज पुजा, प्रशन्न हुनेछन् श्री गणेश